DF oo lacago loogu daabacayo Sudan
3 Jan 3, 2013 - 10:11:48 AM
Dowlada Somalia ayaa waxaa lacag cusub loogu sameynayaa dalka Sudan, iyadoo Wasiirka Maaliyada Somalia oo ka mid ahaa Wafdiga Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud oo tagay dalka Suudaan uu sheegay inay heer gabo-gabo ah mareyso sameynta lacagta.
Wasiirka Maaliyada Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa sheegay in lacagtan la isticmaali doono, balse wuxuu xusay in marka hore la hagaajin doono dhismaha haya’daha maaliyada Somalia, si loo xakameeyo lacagtan.
“Daabacaada lacagta waxay bilaabatay Sanadkii hore, welina waxay socotaa inkastoo ay hada marayso heer gabo-gabo ah, waxaana socda qorshe loo diyaarinayo sidii lacagtan suuqa lagu gelin lahaa” ayuu yiri Wasiika Maaliyada.
Lacagta ayaa waxay ka kooban tahay: 1,000 Shillin, 2,000, 5,000, 10,000 illaa 50,000 oo shillin, taasoo uu Wasiirku sheegay inay tahay mid aan la been abuuri karin.
“Aad ayay lacagtan cusubi uga duwan tahay lacagta hada la adeegsado, taas ayaana keentay in loo sameeyo naqshad cusub oo aan si been ah loo farsameyn Karin, waxayna u baahan tahay wakhti in suuqa ay gasho” ayuu yiri wasiirka.
Sidoo kale, Wasiirka Maaliyada iyo Qorsheynta oo saxaafada kula hadlayay xarunta dalka Suudaan ee Khartoum ayaa sheegay in lacagtan lagu bedeli doono lacagta hada la Isticmaalo, balse ma uusan sheegin in Puntland la gaarsiin doono iyo in kale.
Maxamuud Suleymaan ma uusan sheegin xiliga lacagtan lasoo gelin doono dalka, waxaana lacagtan ay ahayd mid ay dalabtay Dowladii KMG ahayd ee uu hogaaminayay Shariif Sh. Axmed.
Dhanka kale, Madaxweynaha Somalia Xasan Sh. Maxamuud iyo Cumar Al-Bashiir ayaa waxay ku yeesheen Magaalada Khartoum kaasoo ay kaga hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal, ayna Sudan uga qaybqaadan lahayd dib u soo celinta xasiloonida iyo degenaashaha Somalia 20-sano oo colaado ah kadib.
Xukuumada Puntland oo ka shireysa maamulka G/Dhexe
Xasan Shiikh oo Garbaharey gaaray